အစားအသောက်ဖြည့်စွက် | အစားအသောက် & အာဟာရ | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
အစားအသောက်ဖြည့်စွက် | အစားအသောက် & အာဟာရ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်၏အကွာအဝေးကြီးလှ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစားမရှိဘဲသိသာကိုယ်အလေးချိန်ကတိပေး။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို, စျေးကြီးတဲ့အစားအစာအစီအစဉ်များမရှိဘဲနှင့်ပင်လေ့ကျင့်ခန်းမရှိဘဲ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တကယ်ရှိပါတယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးများအတွက်မြောက်မြားစွာထုတ်ကုန်ကော? သူတို့ရဲ့ကတိတော်များကိုသိမ်းဆည်းထားပါဒါမှမဟုတ်သူတို့မှသက်သေပြ ပင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဖြစ်?
Das အစားအသောက်ဖြည့်စွက်၏ rangeအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ကိုယ်အလေးချိန် riesig.- ပရိုတိန်းလှုပ်ကြောင်းဂတိဟုခေါ်တွင်ဖော်မြူလာအစားအစာအနိမ့်ကယ်လိုရီဖြစ်ကြပြီးအရေးကြီးသောအာဟာရပရိုတိန်းအမှုန့်နှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံ။
Detoxifiers Verdauungsenzym.- ဘိုဟိုက်ဒရိတ်-ပိုင်းခြားမှုအတွက်လိုအပ်သောတားစီးအဆီ burners တွေကလည်းအစားအစာ Fette.- Kohlehydratblocker မှတဆင့်ထောက်ပံ့၏ပြန်လည်တားဆီး, အဆီ blockers verlieren.- အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ခန္ဓာကိုယ် dehydrate ပါလိမ့်မယ်
အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်အဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများခြင်းဖြင့်လျှော့ချဖို့, guarana သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာHungergefühl.- Superfood ဖျော်ရည် dieting မရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကတိပေး extracts; သူတို့မဆိုအမှု၌ကျန်းမာဖြစ်ကြသည်။
ဤအအစားအသောက်များတွင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီတစ်ဦးချင်းစီထုတ်လုပ်သူခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းလျှော့ချရေး၌ကြီးသောခံယူချက်သူ၏ထုတ်ကုန်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤမပါဘဲ အစားအသောက်များတွင်၏ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်း။
ဤသည်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အစားအသောက်ဖြည့်စွက်၏အကူအညီဖြင့်အလေးချိန်လျှော့ချဝေဖန်စဉ်းစားရပါမည်။ အားနည်းချက်များကိုများ၏စာရင်းအကျိုးကျေးဇူးများအဖြစ်ကအနည်းဆုံးအဖြစ်ရှည်လျားသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထိရောက်ဆုံးအစားအသောက်ဖြည့်စွက်များထဲတွင်ပရိုတင်းအမှုန့်နှင့် / သို့မဟုတ် Superfood တစ်တုန်လှုပ်စေသည်ရေနှင့်ရောထားတဲ့အတွက်ပုံသေနည်းအစားအသောက်များတွင်ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားအထူးထုတ်ကုန်ကျိန်းသေနိုင်စွမ်းအလျင်အမြန်အောင်မြင်အောင်မြင်မှုကအစားအစာကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ကြသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာသောလူများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖိနှိပ်ကြောင့်အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ကျန်းမာသောအစားအစာထဲမှာ high-ကယ်လိုရီအစားအသောက်များတွင်အကူးအပြောင်းအတွက်အဲဒီဆေးပြားတိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ သတိအစားအသောက်များတွင်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်လျှော့ချအတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအားဖြင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကို။
အဲဒီမှာဒါခေါ်ဆီဥနှင့် Kohlehydratblockern ခုနှစ်တွင် Stiftung Warentest သည်နှင့်အညီသက်သေအပြုသဘော Effekte.Kein အစားအစာနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများအဆီ blockers ယူပြီးထိုကဲ့သို့သော fecal incontinence ဝမ်း, ဗိုက်အောသို့မဟုတ်ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းအဖြစ်အလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်စဉ် NachteileKohlehydratblocker ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်လေ၏အကြောင်းရင်းရှိနိုင်ပါသည်မပါဘဲဆိုလိုသည်။
သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာများ, ချုပ်, Elektrolythaushalt.- Detoxifiers အတွက်နှောင့်အယှက်: အလွန်အကျွံယူရစ်အက်ဆစ်အဆင့်နိမ့်သောအသွေးကိုသကြား, Kaliummangel.- စာစားချင်စိတ်ကို: ကွဲပြားခြားနားသောနှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက်အန္တရာယ်များဒါပေမယ့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ပရိုတိန်း၏ဒုတိယတန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ထပ် Nachteile.- long-term အသုံးပြုမှုကိုချောက်ချားအပြင်ရှိ သို့မဟုတ်သွေးတိုး။
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းမရှိဘဲ, Diet မပါဘဲနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံး
အဘယ်ကြောင့်ပြုကြလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအစားအစာအဆီ - အစားအသောက်များတွင်
အစားအသောက် - အနိမျ့-ကယ်လိုရီအဖျော်ယမကာအခြားနည်းလမ်း
အစားအသောက် - အသေးအကြံပေးချက်များနှင့်အတူသတိကျဆင်းခြင်း